Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Avrily 2014
Azia Atsinanana · Avrily, 2014
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Avrily, 2014
Kambodza11 Avrily 2014
Ny faharatsian'ny toetry ny asa no miteraka ny fahatoranana faobe nahazo ny mpiasa 200 tao amin'ny orinasa fanaovana akanjo any Kambodza.
Singapore : Peta-Drindrina Fanentanana Hahatonga Fanamelohan-Tena Amin'ny Fihinanan-Kena
Singapaoro10 Avrily 2014
Manentana ny olona hieritreritra avo roa heny ny fihinanany hena ilay peta-drindrina fanentanana ao amin'ny toeram-piantsonanà fiarandalamby any Singapore.
Habal-Habal: Moto Any Philippine Mahazaka Mpandeha Hatramin'ny 10
Filipina07 Avrily 2014
Mahazaka mpandeha 10 ve ny moto iray? Eny raha any Philippines ianao fa any ny kodiaran-droa misy motera ampiasaina ho fitateran'olona any an-tanàna ambanivohitra
Notsipahin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana #CongressOccupied Ny Tolo-kevitry ny Filoha Taiwaney
Shina07 Avrily 2014
Nolazain'ny mpikambana ao amin'ny Hetsika #CongressOccupied ho "babangoana, tsy mazavazava ary mandiso fanantenana" ny drafitry ny Filoha Ma momba ny rafitra mpanaramaso ny fifanarahana ara-barotra.
Taiwaney Antsasaky Ny Tapitrisa No Manohana Ny #CongressOccupied (Voabodo Ny Kongresy)
Hong Kong (Shina)06 Avrily 2014
Mitaky ny hialàn'ny governemanta Taiwaney amin'ny fifanekena ara-barotra amin'i Shina ireo mpanao fihetsiketsehana #CongressOccupied (Voabodo ny Kongresy).
#CongressOccupied : Hetsi-Panoheran'Ireo Manome Endrika (Designer) Any Taiwan
Taiwan (ROC)04 Avrily 2014
Nandray anjara mavitrika tamin'ny alàlan'ny famoronana doka, sora-baventy ary akanjo ireo Taiwane mpamorona sary mba ho fanoherana ilay fifanarahana ara-barotra amin'ny Shina miteraka resabe.
Hetsika Kongresy Voabodo Ao Taiwan, Voadika
Shina03 Avrily 2014
Nifamory amin'ny alalan'ny Facebook ny mpandika lahatsoratra anjatony handika amin'ny fiteny hafa ny tantaran'ny fibodoan'ny mpanao fihetsiketsehana ny lapan'ny fanaovan-dalàna ao Taiwan taorian'ny fandaniana ny fifanarahana ara-barotra miaraka amin'i Shina.
Lavitry ny Maso, Lavitry Ny Saina ? Ireo Fihetsiketsehana Any Amin'ny Fihaonana An-Tampony Momba Ny Fiarovana Nokleary
Azia Atsimo03 Avrily 2014
Nosakanan'ny mpiaro ny filoha ny mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny Free Tibet, ary nomena toerana tsara teo akaikin'ny toeram-pivoriana kosa ny hetsika nanery an'i Etazonia mba hampijanona ny fanirian'i Iran amin'ny fanaovana fitaovam-piadiana nokleary.
Shina : Ny Fiantohana Amin'ny Setroka, Vahaolana Farany Amin'ny Fahalotoan'ny Rivotra iainana
Shina01 Avrily 2014
Ny fiantohana amin'ny setroka, izay voalohany amin'ity karazany ity, dia mikendry ireo mpivahiny sy ireo mponina any amin'ny tanàna fito any Shina. Niaina tao anaty fahalotoan'ny rivotra iainana nandritra ny taona maro ny tanàna sasany.
Malezia : Manosika Fotokevitry Ny Tsikombakomba Ny Misterin'ilay Fiaramanidina MH 370
Malezia01 Avrily 2014
Herinandro taorian'ny niandrasana ny valinteny tamin'ny tsy fahitàna ilay fiaramanidina MH370 sy ireo mpandeha 239 dia nisy fotokevitra marobe momba ny tsikombakomba nivoaka mba hameno ny banga momba ny zava-nitranga.